Nepalistudio » गाँजा खाएपछि किन एकोहोरिन्छ मान्छे? याद गर्नुहोस् यस्तोसम्म बनाउँछ गाँजाले गाँजा खाएपछि किन एकोहोरिन्छ मान्छे? याद गर्नुहोस् यस्तोसम्म बनाउँछ गाँजाले – Nepalistudio
गाँजा खाएपछि किन एकोहोरिन्छ मान्छे? याद गर्नुहोस् यस्तोसम्म बनाउँछ गाँजाले
भगवान शिवको विशेष पूजा आरधनासहित आज शिवरात्रि मनाइँदै छ। आजको दिन धेरैले शिवको प्रसाद भन्दै जाँगा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । गाँजाको पात, डाँठ, चोप र फलमा हुने रस नशाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । गाँजाको चोपलाई चरेस भनिन्छ ।
कानुनले गाँजा सेवनलाई अवैध माने पनि शिवरात्रिका दिन भगवान शिवको प्रसादको रूपमा गाँजा सेवन गर्ने चलन छ। गाँजा सेवन गर्नेमा साधु सन्तदेखि सर्वसाधारण पर्छन्। नशालु पदार्थ भाङ, गाँजा धेरै सेवन गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदैन। धेरै सेवन गरे स्मरण क्षमता कम हुने मात्र हैन मस्तिष्कमा समेत गम्भीर असर गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
के तपाई पनि गाँजा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यसो भने तपाइले धेरै कुरामा विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । गाँजाको प्रयोगले धेरै मानिसहरु वर्षौंसम्म मानसिक रोगको सिकार बन्न पुग्छन् । गाँजामा धेरै रसायन पाइन्छन् । त्यसमध्ये टेन्ट्रहाइडो क्यानवनोट दुव्र्यसनी गराउने महत्वपूर्ण रसायन मानिन्छ ।
एक सर्को गाँजा पिउँदा त्यसको असर रगतमा एक महिनासम्म रहन्छ र महिनौंसम्म शरीरमा असर गर्छ ।
किन एकोहोरो हुन्छन्?
गाँजा, भाङजस्तो पदार्थ सेवनपछि मानिसले एक किसिमको अनौठो व्यवहार देखाउँछन्। त्यसैले गाँजा सेवनपछि कोही हाँसेको हाँस्यै गर्छन् भने कोही रोएको रोयै। चिकित्सकीय भाषामा यसलाई युफोरिया भन्ने गरिन्छ। नियमित गाँजा सेवनको शरीर लठ्ठ हुने गर्छ भने कहिले काहीँ मात्र सेवनलाई विनाकारण नै रमाइलो लाग्ने हुँदा मानिसहरू हाँसिरहने रहने गर्छन्। कोही भने विनाकारण रुने गर्छन्।
तर धेरै गाँजा सेवन गर्नेहरूलाई अत्यधिक बान्ता हुने, टाउको दुख्ने हुने हुँदा मानिसलाई नकारात्मक असरसमेत गर्ने गर्छ।
यस्तै,गाँजामा हुने क्यानाबिनोइड र टोफानिन् नामक तत्त्वले मस्तिष्कमा असर गर्छ। जसले निद्रा, भोक, प्यासमा पनि असर गर्ने हुँदा गाँजा सेवनपछि मानिसलाई निद्रा लाग्ने, कसैकसैलाई अत्यधिक भोक लाग्ने गर्छ।
गाँजाको प्रभाव प्राय: सेवन गरेको तीन मिनेटदेखि सुरु हुने गर्छ भई ३० मिनेटभित्र प्रभाव चरम विन्दुमा पुग्ने गर्छ।
क्यानाबिनोइड र टोफानिन् तत्वले यही बेलामा मानिस हाँसिरहने वा लठ्ठ हुने गर्दछ। तर गाँजाको प्रभाव सबै मानिसमा एकै समयमा हुन्छ भन्ने हुँदैन। मानिसको शारीरिक अवस्थाका कारण यसको प्रभाव फरकफरक समयमा हुने गर्दछ। यसबाहेक गाँजा सेवनले मुटुको चाल बिगार्ने, रक्तचाप बढाउने हुँदा हृदयाघातसम्म गराउन सक्छ। तर गाँजामा हुने क्यानाबिनोइड तत्त्वलाई चिकित्सकहरूले औषधि उपचारका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन्।
गाँजा र भाङको असर कसैकसैलाई दीर्घकालीनरुपमा पनि देखिने गर्छ। नियमित गाँजा सेवन गरे कान नसुन्ने , हातखुट्टा झम्झमाउने, धेरै टाउको दुख्नेलगायतका समस्या देखा पर्छ।
विशेषगरी क्यान्सरका बिरामीहरूलाई गाँजामा हुने क्यानाबिनोइड तत्त्वबाट बनेको औषधि दिने गरिन्छ। यसले शरीलाई लट्ठ बनाउने भएकाले दुखाइ कम गर्न अन्तिम स्टेजमा पुगेका क्यान्सरका बिरामीहरूलाई यस्तो औषधि प्रयोग गरिने गरिन्छ। यस्तै क्यानाबिनोइड तत्त्वबाट बनेको औषधि प्रयोग गर्नाले खुसी अनुभव गराउने, आनन्द महसुस गराउने, तनाव घटाउने, निद्रा लगाउने, भोक लगाउने हुँदा यस्तो औषधि बिरामीलाई दिने गरिन्छ।
यस्ता असर देखाउँछ जाँजाले :
गाँजा सेवनबाट देखिने मानसिक रोग :
-सिजोमोनिया (शंका लाग्ने रोग)
-बिर्सने रोग आदि
गाँजाले देखाउने शारीरिक असर :
अचानक गाँजा लाग्दा यस्तो हुन्छ:
-आँखाले हेर्दा जताजतै रंगीचंगी देखिने
-मुटु ढुकढुक हुने
-हावामा उडेको जस्तो भान हुने, र्याल आउने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने
-मुख सुख्खा हुने
-आफू कहाँ छु भन्ने थाहा नहुने
-स्कुल तथा कलेज पढ्ने छात्र–छात्रा
-छात्राबासमा बस्ने विधार्थी
-वंशाणुगत रुपमा दुर्व्यशीमा फसेको परिवार
-मानसिक रोगका बिरामी
-अन्य दुव्र्यसनमा फसेका व्यक्ति
(यो सामग्री विभिन्न अन्लाईनमा प्रकाशित समाचारमा आधारमा तयार पारिएको हो।)
२० फाल्गुन २०७५, सोमबार प्रकाशित